Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2010 January 01
Tantara tamin'ny 01 Janoary 2010
Fomba sy fanao isaky ny taombaovao manerantany an-dahatsary
Amerika Latina01 Janoary 2010
Afomanga saripikan'i Tormel Samy manana ny fomba(n-drazana) ankalazany ny fahatongavan'ny taona vaovao ny mponina manerantany. Amin'ity alina ity, amin'ny alalan'ny lahatsary no itondranay anareo hitsidika ny karazam-pombafomba arahin'ny olona hahatsara ny anjarany, hahazoan-karena na antsipirian-javatra hafa tiany ho azo amin'ny taona ho avy. Any Meksika, misy ny sasany izay mandrehitra...
Bangladesh01 Janoary 2010
Arabia Saodita : Ny tondra-dranon'i Jeddah an-tsary
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana01 Janoary 2010
Mbola miresaka momba ny tondra-dranon'i Jeddah sy ny vokatra naterany ny olon-drehetra, telo herinandro taorian'ny tondra-drano nitranga tany amina tanàna tany Arabie Saoudite andrefana. Ireo mpampiasa aterineto dia mizara rohy ao amin'ny YouTube, mampiseho ny fahasimbana goavana, avy amin'ny mailaka. Maro ireo video azo tamin'izany.
Taorian'ny nadravàn'ny afo ny ala an-tanan-dehibe lehibe indrindra maneran-tany tao Rio de Janeiro tamin'ity Septambra ity, manangom-baovao , manome ny heviny ary manentana ireo mpitoraka blaogy maro.